Huawei nwere ike nweta mgbapụta ọzọ na United States | Androidsis
Ọnọdụ dị n’etiti Huawei na United States ka dịtụ mgbagwoju anya ma kwụsie ike ma ọlị. Dị ka ọtụtụ n'ime unu mara, Mọnde a, Ọgọstụ 19, ụbọchị njedebe nke gọọmentị America nyere ụlọ ọrụ North America ka ha gaa n'ihu na-azụ ahịa na ụlọ ọrụ ndị China. Agbanyeghị na a na-atụlezi ohere ịmegharị ọhụụ, nke ga-eme ka nkwekọrịta a were ụbọchị 90.
Nke a ga - apụta na ụlọ ọrụ ndị America ga-enwe ike ịga n'ihu na-azụ ahịa na Huawei. Ọ bụ ezie na ika ahụ ga-enwe ike ịga n'ihu na-eji ọrụ Google, dị ka gam akporo, ruo na Nọvemba. Ozi na-abịa ugbu a na mkparita uka dị n'etiti mba ndị ahụ etisasịwo, ọzọ, na ika ka ẹkenam HarmonyOS.
Nke a ga - apụta na ụlọ ọrụ ndị America ga - enwe ike ịga n’ihu na - ekwurịta okwu ma ọ bụ na - arụkọ ọrụ ọnụ na Huawei. Ọ bụ ezie na nke a bụ ihe na-anọgide na-ejighị n'aka, n'ihi na Mkparịta ụka azụmahịa n'etiti China na United States gafere oge ọjọọ ọzọ, nke na - eme ka otutu obi abuo di n'ahịa.
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ emeelarị ka o doo anya na ọ bụrụ na ọ dị mkpa nwere ike mfe ịgbanwee si gam akporo na HarmonyOS, sistemụ arụmọrụ nke ha gosipụtara obere ihe n'izu gara aga. Yabụ nke a bụ ihe ekwesiri iburu n'uche na nke a, nyere ọnọdụ ahụ.
Onye ọ bụla nke chọrọ ka ụbọchị 90 gbaa ọsọ nwere ike iche na Ekwentị Huawei ga-emelite gam akporo Q. E wezụga ịnweta EMUI 10, Ọhụrụ mbipute nke ika China, nke dabere na ụdị ọhụụ a nke gam akporo. Mana ugbu a anyị amaghị mgbe ha nwere ike nweta sistemụ arụmọrụ.
Ya mere, ọtụtụ akụkụ ka dị n'ikuku n'akụkụ a. Anyị ga-echere maka nkwenye ndị ọzọ na enwere ike ịme nkwekọrịta a. Ọ bụ ezie na o doro anya na Huawei na-adịgide na crosshairs nke US, nke nwere ike ịpụta na enweghị mgbagwoju anya banyere ụlọ ọrụ ahụ akwụsịbeghị kpamkpam.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei ga-enweta mgbakwunye ụbọchị 90 site na United States